इयरफोन कानमा धेरै बेरसम्म सुन्नुहुन्छ? ‘क्यान्सर’ होला है ! « LiveMandu
१९ कार्तिक २०७५, सोमबार १०:३५
प्रविधिको विकास भएसँगै प्राय अधिकांश मानिसहरु कानमा इयरफोन राखेर लगातार गीत, रेडियो वा अन्यस म्यूजिक वा फिल्मा हेरि/सुनिरहेका हुन्छन्। यति मात्रै नभएर आफू निदाएको अवस्थामा पनि उसले कानमा इयरफोन लगाएरै सुतिहेका हुन्छन्।
बजारमा धेरै प्रकारका इयरफोनहरु आइरहेका हुन्छ। कुनै निक्कैछ कमसल प्रकारको हुन्छ जसले मानिसको शरीरलाई तुरुन्तैफ असर पार्दछ। यसले दिनप्रतिदिन उसलाई बिरामी बनाउँदै जैलान्छ। धेरै इयरफोनको प्रयोग गर्नेलाई अन्तिममा क्यादन्सर रोगले आफ्नो सिकार बनाउन सक्छ। साथै यसले यस्ता विभिन्न प्रकारका रोग समेत निम्त्याउने स्टोनी ब्रुक स्कुल अफ मेडिसिनले दावी गरेको छ ।
इयरफोनको लामो समय प्रयोग गर्नाले मानिसको सुन्नम सक्नेद क्षमतामा विसतारै ह्रास आउँदै जान्छ। मानिसको शरीरमा ४० देखि ५० प्रतिशत श्रवण शक्ति कम सुन्नेह हुन्छ। यसका साथै टाढाको आवाज सुन्नी कठिनाइ हुन्छ। यसलेमानिसलाई चाडैं नै बहिरो बनाउन सक्छ।
लामो समयसम्मम कानमा इयरफोन प्रयोग गर्नाले कान सुनिने समस्या हुन्छ। साथै कानको सुन्नेम कोषहरु ड्याामेज हुन सक्छ भने श्रवण शक्ति विस्तारै छिन हुन सक्छ।
इयरफोनमा जमेको धुँवा धुलोले इन्फेक्शन हुन सक्छ भने यसले पछि ठूलो रोग निम्त्याउन सक्छ। स्पष्ट आवाज सुन्नल नसक्नेन, झन्झनाहट हुने, कान दुख्ने् समस्याले सताउन सक्छ।
अन्तिममा क्याछन्सर वा हृदय रोग
तीव्र गतिमा इयरफोन सुन्नारले मानिसलाई अन्तिममा कानकै क्या्न्सले सिकार बनाउन सक्छ। साथै मुटुसम्बन्धी रोगले समेत च्याापेर कुनै पनि पनि हृदयघातले मानिसको मृत्युा पनि हुन सक्छ।